SPC Smart Ultimate, doorasho dhab ah oo dhaqaale badan | Qalabka Wararka
Miguel Hernández | | General, Mobiles, Reviews, Telefoon
Waxaan la laabaneynaa SPC, shirkad na raacday oo leh falanqayn badan Sanadihii la soo dhaafay, inkastoo waqtigan aan fursad u haysanno inaan aragno qalab laga yaabo in aan ahayn khadka ugu awoodda badan ee ganacsiga, laakiin aan waligood dhibin in la xasuusto, waxaan ka hadleynaa casriga casriga ah.
Waxaan falanqeyneynaa SPC Smart Ultimate cusub, doorasho dhaqaale oo leh wax kasta oo aad u baahan tahay nolol maalmeedka iyo madax-bannaanida weyn ee kuwa daneynaya qiimaha. Nagala hel sifooyinka terminaalkan cusub ee SPC iyo haddii uu runtii isu dhigo beddelka sida waafaqsan qiimihiisu.
1 Nakhshad: Qiimaha iyo cimri dhererka calankiiba
3 Waayo -aragnimada warbaahinnada badan iyo madax -bannaanida
Nakhshad: Qiimaha iyo cimri dhererka calankiiba
Ugu horreyntii, waxaan helnaa jir caag ah, wax sidoo kale ka dhacaya dhabarka, halkaas oo aan ku leenahay dabool ka samaysan dhar labanlaab ah oo noo ogolaanaya inaan bixinno xajin weyn iyo muuqaal, sababta aan u dhihin, wax ka sii qosol badan. Foo ka samaysan caag madow oo saafi ah oo dhabarka ku yaal, Caannimada oo dhan waxay u hadhsan tahay dareeraha iyo iftiinka LED-ka.
Qiyaasaha: 158,4 × 74,6 × 10,15
Miisaanka: Gram 195
Qaybta sare ee jaakadda 3,5mm ayaa weli jirta, halka qaybta hoose aan ku leenahay dekedda USB-C kaas oo aan ku fulin doono kharashka. Badhan laba jibbaaran oo ku yaal profile bidix ee mugga iyo badhanka "awoodda" ee dhinaca midig, fikradayda, ayaa ka dhigi kara wax yar ka weyn. Telefoonku waxa uu leeyahay cabbirro la taaban karo iyo miisaan la socda, laakiin waxa uu dareemaya in si fiican loo dhisay waxayna u muuqataa inay leedahay heer wanaagsan oo iska caabin ah wakhtiga iyo saamaynta.
Tan dambe waxaan leenahay kiis silikoon ah oo hufan oo lagu daray xirmada, oo ay la socdaan fiilada dallacaadda, adabtarada korantada iyo dabcan filimka difaaca ee shaashadda soo socota. Naqshad bixisa, oo leh fiimyo afka hore lagu sheegay iyo sidoo kale kamarad "nooca dhibicda".
SPC Smart Ultimate-kan waxa la socda processor-ka Quad Core Unisoc T310 2GHz, wax ka duwan waxa aan u isticmaalnay in aan ku aragno Qualcomm Snapdragon ee caanka ah iyo dabcan MediaTek. Maxaa intaas dheer, Waxa la socda 3GB ee LPDDR3 RAM ah. in imtixaanadayada ay si fiican ugu dhaqaaqday codsiyada caadiga ah iyo RRSS, in kasta oo sida cad aynaan codsan karin dadaal, awoodda awgeed, ay suurtogal tahay inay samayso.
Waxay leedahay a IMG PowerVR GE8300 GPU ku filan in lagu socodsiiyo garaafyada codsiyada aan soo sheegnay iyo sidoo kale interface interface, oo ka fog bixinta waxqabadka la aqbali karo ee ciyaaraha fiidiyaha ee aadka loo raro sida CoD Mobile ama Asphalt 9. Sida kaydinta, waxaan haysanaa 32GB ee xusuusta gudaha.
Waxay leedahay USB-C OTG
Dhammaan qalabkan qalabka ah wuxuu la shaqeeyaa Android 11 qaab aad u nadiif ah, shay la mahadiyay, oo ka fogaanaya noocyada kale sida Realme ee ka buuxiya shaashada adware, wax aad u eg tahay kuwiina muddo dheer i daba socday. inaan noqdo qalad aan la cafin karin.
Taas macnaheedu waa haaWaxaan kaliya dooneynaa inaan helno codsiyada rasmiga ah ee Google si uu si wanaagsan ugu socodsiiyo nidaamka hawlgalka, iyo codsiga rasmiga ah ee SPC.
Heerka isku xirnaanta waxaan yeelan doonaa dhammaan shabakadaha 4G Sida caadiga ah ee dhulka Yurub: (B1, B3, B7, B20), iyo sidoo kale 3G @ 21 Mbps, HSPA + (900/2100) iyo dabcan GPRS / GSM (850/900/1800/1900). Waxaan sidoo kale haysanaa GPS iyo A-GPS oo ay weheliyaan WiFi 802.11 a/b/g/n/ac. 2.4GHz iyo 5GHz oo ay weheliso isku xirnaanta Bluetooth 5.0.
Waxay soo jeedinaysaa dareenkayaga inaan sii wadno ikhtiyaarka ah ku raaxayso Raadiyaha FM, wax shaki la'aan ka farxin doona qayb ka mid ah isticmaalayaasha. Dhanka kale, saxaaradda la rari karo ayaa noo ogolaan doonta inaan ku darno laba kaadhka NanoSIM ama balaadhi xusuusta ilaa 256GB in ka badan.
Waayo -aragnimada warbaahinnada badan iyo madax -bannaanida
Waxaan leenahay shaashad 6,1 inji, IPS LCD panel kaas oo leh dhalaal ku filan, inkastoo laga yaabo inaysan u iftiimin xaaladaha dibadda ee leh iftiin dabiici ah oo aad u badan. Waxa kale oo ay leedahay saamiga dhinac ee 19,5: 9 iyo 16,7 milyan midabyo, dhammaantood waxay bixiyaan HD + xallinta, taas oo ah, 1560 × 720, taasoo siinaysa isticmaale cufnaanta 282 pixels halkii inch.
Shaashadu waxay leedahay hagaajin midab ku filan iyo guddi sida muuqata raqiis ah. Codka, oo ka imanaya hal kuhadle, waa mid awood badan oo ku filan laakiin ka maqan dabeecad (sababo qiimaha muuqda awgood).
Dhanka madaxbanaanida waxaan leenahay a 3.000 mAh batari, inkasta oo dhumucda aaladda awgeed aan u malaynaynay in ay ka badan karto. Ma hayno macluumaad ku saabsan xawaaraha dallacaadda, haddii aan ku darno taas kuma jirto sanduuqa (in kasta oo ay size) lahayn adabtarada koronto, sababtoo ah waxaan leenahay duufaan qumman.
Si kastaba ha noqotee, l3.000 mAh waxay bixisaa natiijo wanaagsan maalin iyo badh ama laba maalmood iyada oo la tixgelinayo awoodda farsamada ee qalabka iyo in Nidaamka Hawlgalku uu yahay mid aad u nadiif ah, sidaas darteed ma yeelan doono habab aan macquul ahayn oo ku saabsan asalka.
Hayso kamarad danbe 13MP oo awood u leh in lagu duubo xallinta FullHD (korka shaashadda), Ma jiro Hab Habeen ama awood dhaqdhaqaaq tartiib ah. Dhinaceeda, kamarada hore waxay leedahay 8MP in ka badan selfies ku filan. Sida cad, Kaamirooyinka SPC Smart Ultimate waxay la jaan qaadayaan qiimihiisu hooseeya, ujeedadeeduna maaha mid kale oo aan ahayn inay awood u yeelato inay la wadaagto waxyaabaha qaar ee shabakadaha bulshada oo ay naga saarto dhibaatada.
Tani SPC Smart Ultimate Waxay leedahay qiime kaliya 119 euro, mana garanayo inaad wax kale maskaxda ku hayso. Wax yar ayaa looga baahan yahay terminaalka kharashkiisu aad u yar yahay. Waxaan isku helnaa naf-badbaadiye, taleefan noo oggolaanaya inaan wacno xaalado wanaagsan, ku isticmaalno waxyaabaha ku jira warbaahinta badan ee aaladaha muhiimka ah iyada oo aan nooc kasta oo qallafsanaan ah oo aan la xiriirno kuwa aan jecelnahay iyada oo loo marayo codsiyada ugu caansan, wax kale maahan.
Waxay bixisaa qalab dhererkiisu yahay qiimaha, oo si toos ah ula xifaaltamaya Xiaomi's Redmi, laakiin waxay na siinaysaa waayo-aragnimo dhammaystiran oo nadiif ah, iyada oo aan lahayn dhexdhexaadiye, xayeysiis ama codsiyo aan loo baahnayn. Haddii aad u baahan tahay taleefan kuwa yaryar, dadka waayeelka ah ama kaliya qalab labaad oo nafo lagu badbaadiyo, SPC Smart Ultimate waxa ay ku siinaysaa saxda ah waxa aad ka bixiso.
OS gabi ahaanba nadiif ah
panel waa HD
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » SPC Smart Ultimate, doorasho dhab ah oo dhaqaale badan